Baarlamaanka oo Kalsoonidii kala Laabtay Ra'isulwasaare Kheyre
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka ah Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in mudanayaasha Baarlamanku ay maanta kalsoonidii kala noqdeen xukumaadda Ra'uusul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa dhinaca kale shirkiisa jaraa’id ugu baaqay Madaxweynaha in uu soo magacaabo ra'iisalwasaare cusub.
Haddaba, wararkii ugu danbeeyey waxaa kulankaasi nooga qeybgalay warkanna ka soo diray wariyahayaga, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kalsooni kala noqoashada Ra'isulwasaare Kheyre